मानिसहरु लाई आफ्नो रायहरु अरु मा थोपेको प्राकृतिक प्रवृत्ति छ। जबकि यो कष्टप्रद देखिन्छ, तपाईं यसलाई आफ्नो लाभको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ! सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मले सर्वेक्षण वा सर्वेक्षण सुविधा प्रदान गर्दछ त्यसैले यसको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं केहि साधारण को बारे मा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ के रूप मा राम्रो छुट्टी स्थान के छ, के तपाईं के पिउनु पर्छ, वा यदि उनीहरू लाग्छ कि तपाईं आफ्नो कपाल काट्नु पर्छ वा छैन। तपाईं यसको र colors्गहरू, उनीहरूले के गतिविधिहरू चाहानुहुन्छ, वा उनीहरू के सेवाहरू चाहन्छन् भनेर सोधेर उनीहरूको प्राथमिकताहरूको बारेमा बढी जान्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वेक्षणको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू अनियमित प्रश्नहरूको रूपमा आउँदछन् त्यसैले मानिसहरू आफ्ना दुई सेन्ट दिन डराउँदैनन्।
धेरै ब्लगर्सले प्रतियोगिता सुरू गरेर अनुयायीहरू प्राप्त गर्थे। यसले तपाइँको अनलाइन उपस्थिति बढावा दिन्छ, र तपाइँ द्रुत रूप मा रूपान्तरण प्राप्त गर्नुहुन्छ किनभने तपाइँको पृष्ठ आगन्तुकहरूलाई केहि गर्न आवश्यक छ कि तिनीहरू प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बन्न सक्छन्। तपाईं यो अवसर आफ्नो पृष्ठ प्रमोट गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र रूपान्तरण दरहरूमा मात्र लाइक र सेयरहरू मात्र सुधार गर्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं भ्रमण गर्ने व्यक्तिको प्रोफाइलको बारेमा तपाईंको ज्ञान बढाउने, वा अनियमित रूपमा तपाईंको पोष्टहरू पछिल्लो स्क्रोल गर्न चाहानुहुन्छ भने, प्रश्न र उत्तर सत्र समात्नुहोस्। यसले काम गर्दछ किनकि यदि ती स्वीकार्छन् वा गर्दैनन्, व्यक्ति वास्तवमै यसलाई मन पराउँछन् जब कोही तिनीहरूको राय माग्दछ। जब कुनै व्यक्तिले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको लागि सोध्छन् तब निश्चित आवश्यकता पूरा हुन्छ। यो एक उत्तम तरिका हो तपाईको नेटवर्कमा व्यक्तिलाई अझ राम्ररी बुझ्न र रणनीतिहरूको साथ आउन जुन तपाईंको भविष्यको पोष्ट प्रवृत्तिलाई मद्दत गर्दछ।
सबै चीज यति छिटो-गति भएको कारण, मानिसहरू धेरै अधीर भएका छन्। फास्ट फूड सजिलैसँग राम्रो भोजनमा लिन सकिन्छ किनभने मानिसहरू अब उनीहरूको खानाको लागि पर्खिरहेका छैनन्। हामीले अनलाइन पोष्ट गर्नुहुनेको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि यो धेरै शब्दयुक्त छ, विश्वास गर्नुहोस् कि व्यक्तिहरू यसलाई पछाडि मात्र स्क्रोल गर्नेछन्। यसलाई समाधान गर्न, त्यो निबन्धलाई इन्फोग्राफिकमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। विभिन्न तथ्या .्क, डेटा वा तुलनाको रूपमा जानकारीको दृश्य प्रतिनिधित्व पाठकहरूलाई बढी रमाईलो हुन्छ, त्यसैले एक इन्फोग्राफिक महत्त्वपूर्ण छ। ग्राफिक्स सिर्जना गर्न को लागी, तपाईं जस्तै उपकरणहरू द्वारा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ क्यानभा र कसरी इन्फोग्राफिक्स सिर्जना गर्ने बारे प्रेरणा पाउनुहोस् जसले ध्यान मात्र खिच्दैन, तर पनि रूपान्तरणलाई बढावा दिन्छ।
सबैलाई अब एक राम्रो हाँस्न आवश्यक छ र तसर्थ GIF एनिमेसन वा मेम्स अपलोड गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको पोष्टमा केहि हास्य प्रकोप गर्न यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो केवल मानिसहरूलाई हाँस्नको लागि मात्र होईन; यो मानिसहरूलाई देखाउने बारेमा हो कि तपाईं पहुँचयोग्य हुनुहुन्छ कि तपाईं ममा केही हास्य हुनुहुन्छ। रमाईलो मानिसहरूसँग सम्बन्धित गर्न सँधै सजिलो हुन्छ। तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कति छिटो सेयरहरू र रूपान्तरणहरू बढ्नेछन् तपाईंले एक मेम अपलोड गरे पछि।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले सन्देश र कमेन्टलाई तुरून्त जवाफ दिनुहुन्छ। व्यक्तिहरूको ध्यान कम स्पान छ र उनीहरूको चासो हराउँछ जब कोही तिनीहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिन धेरै लामो लाग्छ। सन्देशहरूमा तुरून्त जवाफ दिएर, तपाईं यो प्रभाव दिनुहोस् कि तपाईं अनलाइन सक्रिय हुनुहुन्छ र तपाईंले कुनै पनि समय तिनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं स्वत: जवाफ पनि सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई यो बताउनको लागि कि तपाईंले उनीहरूको सन्देश देख्नुभयो र तपाईंले उपलब्ध भएको क्षणमा तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। सन्देश बाकसमा पप हुने "देखिएको" तुलनामा त्यो अझ राम्रो हुन्छ किनकि त्यसले उनीहरूलाई महसुस गराउँदछ कि तपाईंले जानाजानी उनीहरूलाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छ।
तपाईले अनुसरण गर्ने सोशल मिडिया खाताहरूको बारे सोच्नुहोस्। तपाईं किन तिनीहरूलाई पछ्याउनुहुन्छ? सामाजिक मिडिया खाताको प्रकार बन्नुहोस् जुन तपाईं लगातार अपडेटहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। सँधै कुराकानीमा संलग्न हुनुहोस्, र ट्याग गर्नुहोस् व्यक्तिहरू जुन तपाईंले उद्धरण गर्नुभयो किनभने यसले उनीहरूलाई महसुस गराउँदछ कि तपाईंले उनीहरूलाई आदर गर्नुहुन्छ र सम्मान गर्नुहुन्छ। सामग्री निर्माणमा प्रीमियम राख्नुहोस्, र अरूलाई प्रचार गर्नुहोस् विशेष गरी यदि तपाईंलाई लाग्छ कि उनीहरूको काम तपाईंको अनुयायीहरूले मनपराउनेहरू केहि हो। कथाहरू, अन्तर्दृष्टि, जानकारी, साझा चीजहरूको साथ उदार हुनुहोस् जुन तपाईंको अनुयायीहरूका लागि मूल्यवान हुनेछ। जब तपाईं अरूलाई बढावा दिन डराउँदैनन्, तपाईंको अनुयायीहरूले यो महसुस गर्नेछन् र उनीहरूलाई तपाईंको पोष्टहरू साझा गर्न चाहान्छन्।
सामाजिक सूट: ठूलो, बहु-स्थान उद्यमहरूको लागि सोशल मीडिया व्यवस्थापन
एक प्रभावी B2B विकास रणनीति प्रयोग गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी चरणहरू के के हुन्?